Vaovao - Fahalalana mahazatra amin'ny lamba lamba
Fahalalana iraisana amin'ny lamba fitafiana
1. lamba malefaka
Ny lamba malefaka amin'ny ankapobeny dia manify sy maivana, miaraka amin'ny fahatsapana kofehy drape, tsipika malama ary silhouette voajanahary. Ny lamba malefaka dia misy ny lamba vita amin'ny landy sy ny landy vita amin'ny lamba malemy ary lamba rongony malemy. Ny lamba fanjairana malefaka matetika dia mampiasa endrika mahitsy sy tsotra hanehoana ireo fiolahana tsara amin'ny vatan'olombelona amin'ny famolavolana akanjo; landy, hemp ary lamba hafa malalaka kokoa sy pleated kokoa, mampiseho ny fikorianan'ny lamba tsipika.
2. Lamba mangatsiatsiaka be
Ny lamba crisp dia misy tsipika mazava sy fahatsapana ny habetsahana, izay afaka mamorona silhouette plump. Ampiasaina matetika ny lamba landihazo, lamba polyester-landihazo, corduroy, rongony, ary volon'ondry matevina matevina sy lamba fibre simika. Ny lamba toy izany dia azo ampiasaina amin'ny endrika izay manasongadina ny maha-marina ny maodelim-pitafiana, toy ny akanjo sy akanjo.
3. lamba mamirapiratra
Ny hazavana mamirapiratra dia malama ary afaka taratry ny hazavana mamirapiratra, miaraka amin'ny fahatsapana mamirapiratra. Ny lamba toy izany dia misy lamba vita amin'ny satin. Ampiasaina matetika amin'ny akanjo amin'ny alina na fitafiana fampisehoana an-tsehatra izy io mba hamokarana sary mahafinaritra sy mahafinaritra. Ny lamba mamirapiratra dia manana fahalalahana maodely modely amin'ny fampisehoana akanjo, ary afaka manana endrika tsotra na fomba mihoampampana.
4. Lamba matevina sy mavesatra
Ny lamba matevina sy matevina dia matevina sy marevaka ary afaka mamokatra fihenan-danja azo antoka, anisan'izany ny karazana volon-koditra matevina sy lamba matevina. Ny lamba dia manana fahatsapana fanitarana vatana, ary tsy mety ny mampiasa firy sy fanangonana be loatra. Amin'ny endriny, ny endrika A sy H no mety indrindra.
5. lamba mangarahara
Ny lamba mangarahara dia maivana sy mangarahara, miaraka amin'ny fiakarana kanto kanto sy miafina. Ao anatin'izany ny landihazo, ny landy, ny lamba vita amin'ny fibre simika, toy ny georgette, sutera satin, lamba vita amin'ny simika vita amin'ny simika, sns ... Mba hanambarana ny fihoaran'ny lamba, ny tsipika mahazatra matetika dia feno sy manankarena amin'ny endrika H-dasy sy boribory. endrika endrika.